Dhalinyarro soomaaliyeed oo guullo ka soo hoyey ciyaar ay la galeen Shiinaha | Somaliska
Dhalinyarro soomaaliyeed oo guullo ka soo hoyey ciyaar ay la galeen Shiinaha
Wiilasha soomaaliyeed ee ciyaara ciyaarta xeegadda ee loo yaqaano innebandy, ayaa xalay ciyaar ka dhacday degmadda Mölnlycke ee duleedka magaaladda Göteborg waxaa 10- 1 kaga badiyeen koox Shiinees ah oo ciyaara xeegadda.
Ciyaartan oo ah mid aad u xiiso badneyd ayaa wiilasha soomaalida waxaa ay muujiyeen karti ah ciyaarta eeysan horey u ciyaari jirin ama aaanu ka mid aheyn ciyaaraha soomaalida u badan tahay. Dhinaca kale ma aheyn wiilasha oo keliya dhalintii halkaasi wac darro ka dhigyta, waxaa sidoo kale iyagana halkaasi ciyaaray gabdhaha soomaaliyeed ee ciyaarta xeegadda iyo koox shiinees ah.
Ciyaarta gabdhaha soomaaliyeed ee ay la dheeleen Shiinaha ayaa ka xiiso badneyn tii wiilasha waxaana ay dhamaatay bar bar dhac 2-2. Dhalinyartan oo narkii ciyaarta dhamaatay la hadlay Somaliska.com, ayaa sheegtay in ciyaarahan ay qeyb yihiin horumarka xagga isboortiga ee soomaalida Iswiidhan ku dooneeyso ineey ka gaarto.
Ma ahan markii ugu horeeysay oodhalinyarro soomaaliyeed ciyaarahaan ciyaarta xeegadda waxaa horey u jiray dhalinyarro ciyaara xeegadda barafka oo caan ka noqday dalka oo dhan, inkastoo aaneey guulo keenin haddana waxeey aheeyeen kooxdii ugu horeeysay ee abid Afrikaan ah oo ciyaarta xiyaarta xeeggadda barafka.